त्यस्ता घटनाहरूमा जहाँ कम्प्युटर रैमको कमी छैन, विन्डोज7स्वैप फाइल प्रयोग गरिन्छ। जहाँ यो फाइल अवस्थित छ, तपाईले लेख पढेर सिक्नु हुनेछ। यसको अतिरिक्त, अनुभवी प्रयोगकर्ताहरूको सल्लाह पछि तपाई ओएसको सही अपरेसनको लागि आवश्यक स्वैप फाइलको इष्टतम साइज निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ।
केहि अवस्थामा, यो फाईल सामान्यतया सिफारिस गरिएको छैन, किनकि यसले कम्प्युटरको गतिलाई असर गर्नेछ । त्यसकारण, प्याजिंग फाईल कहिलेकाहीं अक्षम गरिएको छ। तर सबै कुराको क्रममा।
मलाई किन स्वैप फाइल चाहिन्छ?
परिस्थिती (भौतिक मेमोरी) जब पर्याप्त छैन त्यहाँ परिस्थितिहरू छन्। उदाहरणका लागि, तपाइँ एक खेल स्थापना गर्न चाहानुहुन्छ जुन4GB को RAM चाहिन्छ, तर तपाइँसँग मात्र तपाइँको कम्प्युटरमा3जीबी छ। यस अवस्थामा, ओएस भर्चुअल मेमोरी प्रयोग गर्दछ , जुन हो, स्वैप फाइल (जसलाई पछि "FP" भनिन्छ)।
यो उल्लेखनीय छ कि आज राम को लागत धेरै उच्च छैन, त्यसैले यो राम्रो छ कि धेरै भौतिक मेमोरी स्टोटहरू स्थापना गर्न र स्थापना गर्न राम्रो छ किनकि भर्चुअल एक हार्ड डिस्कमा छ र यसको पढाइ लामो समय लाग्छ।
फलस्वरूप, तपाईंको कम्प्यूटर "धीमी गति" हुनेछ। यसको अतिरिक्त, यस्तो लोडको कारण , HDD वा SDD सेवा सेवा घटाउनेछ।
यद्यपि, यदि एएफ सही तरिकाले कन्फिगर गरिएको छ भने यसले हार्ड ड्राइवमा "खाली" खाली ठाउँ "खाने" थप गर्दैन, साथै, हार्ड डिस्कको टुक्रामा निकै कम हुनेछ।
वैसे, Windows XP7 मा स्वैप फाइल को अन्य डिस्क मा C (system) ड्राइव देखि स्थानांतरित गर्न सकिन्छ, हुनत केहि प्रयोगकर्ताहरु लाई यसलाई सल्लाह छैन।
स्वैप फाइल कहाँ छ?
यो हार्ड ड्राइभ को विभाजन मध्ये एक मा स्थित छ र भनिन्छ pagefile.sys। यो लुकेको फाईल हो, त्यसैले यदि तपाइँ यसलाई हेर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाइँ लुकेको फोल्डरहरू र फाइलहरूको दृश्यता सक्रिय गर्न आवश्यक छ।
"सुरू गर्नुहोस्" क्लिक गर्नुहोस् र PU खोल्नुहोस्। "फोल्डर विकल्प" खण्डमा जानुहोस्, र त्यसपछि "हेर्नुहोस्" ट्याब क्लिक गर्नुहोस्। स्लाइडर तल स्क्रोल गर्नुहोस् र लुकेका फाइलहरू देखाउनको लागि चेकबक्समा क्लिक गर्नुहोस्। अब "लागू गर्नुहोस्" मा क्लिक गर्नुहोस्।
अब तपाई Windows7पृष्ठिङ फाइल फेला पार्न सक्नुहुन्छ। जहाँ छ, तपाइँ पहिले नै थाहा छ (प्रणाली डिस्कको विभाजन)। तर यसले उनीसँग सीधा काम गर्दैन। तथापि, त्यहाँ अर्को तरिका हो।
पृष्ठिंग फाइल निष्क्रिय गरिँदै
यदि तपाइँसँग तपाइँको कम्प्यूटरमा पर्याप्त "RAM" छ भने, सम्भवतः तपाइँ विन्डोजमा प्याजिंग फाईल निष्क्रिय गर्न चाहनु हुने छ। यो गर्नका लागी, तपाइँ "My Computer" आइकनमा PCM प्रतिमा क्लिक गर्न र सन्दर्भ मेनुमा "गुण" चयन गर्नुपर्छ। त्यहाँ अर्को तरिका हो - "स्टार्ट" मेनु, त्यसपछि पु प्रविष्टि गर्नुहोस् र "प्रणाली" सेक्शन खोल्नुहोस्।
बायाँमा त्यहाँ एक मेनु हो जहाँ तपाईंलाई आवश्यक छ "अतिरिक्त प्रणाली परिमिति"। यहाँ तपाईं "उन्नत" ट्याब, "प्रदर्शन" सब्सनमेन्टमा रुचि राख्नुहुन्छ। "विकल्प" क्लिक गर्नुहोस् र फेरि "उन्नत" चयन गर्नुहोस्। "परिवर्तन" मा क्लिक गर्नुहोस् र सञ्झ्याल खोल्छ जुन, स्वचालित प्याजिंग फाइल विकल्पको बगलमा चेकबक्स खाली गर्नुहोस्। "कुनै प्याकेज फाइल" विकल्प जाँच गर्नुहोस् र "OK" क्लिक गरेर सेटिङहरूको पुष्टि गर्नुहोस्। ओएस पुन: सुरू गर्नुहोस्।
त्यसोभए, जहाँ तपाइँ विन्डोज7मा त्यहाँ प्यानिंग फाईल र यसलाई कसरी निष्क्रिय पार्नु हुन्छ।
स्वैप फाइल कन्फिगर गर्दै
ल्याप्टप वा कम्प्यूटरको सही अपरेसनको लागि, तपाईंले स्वैप फाइल ठीकसँग कन्फिगर गर्न आवश्यक छ। सबैभन्दा पहिला, तपाइँलाई थाहा छ कि कतिपय स्थान 7, Windows को पृष्ठिंग फाइल अन्तर्गत आवंटित गर्न को लागी छ। यो कहाँ छ, तपाईंलाई सम्झना छ, ताकि तपाईं स्वतन्त्र रूपमा यसको मूल्य परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ। फेरि "भर्चुअल मेमोरी" खण्ड खोल्नुहोस् र "आकार निर्दिष्ट गर्नुहोस्" मा क्लिक गर्नुहोस्।
नोट: अधिकतम मात्रा "EP" को लगभग2पटक हुनुपर्छ "RAM"। प्रारम्भिक आकार अधिकतमको रूपमा राम्रो सेट छ। वैकल्पिक रूपमा, "सिफारिस गरिएका" वस्तुको विपरीत संकेत गरिएको मान निर्दिष्ट गर्नुहोस्।
अर्को महत्वपूर्ण बिन्दु स्वैप फाइलको स्थानान्तरण हो जुन डिस्कबाट तपाईँले अर्को हार्ड ड्राइवमा OS स्थापना गर्नुभएको छ, जुन गति बढाउनेछ।
अब तपाईलाई थाहा छ कि विन्डोज7प्याजिंग फाइलको लागि हो, सेटअप र अप्टिमाइजेसन समस्या हुनुपर्दैन।
अनुभवी प्रयोगकर्ताहरूको सिफारिसहरू सुन्नु भएको छ, तपाईले स्वैप फाइल ठीकसँग कन्फिगर गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ मुख्य सुझावहरू छन्:
यो पहिले नै नै भनिएको छ कि यो राम्रो छ जब भर्चुअल मेमोरीले प्रणाली हार्ड ड्राइभमा स्पेस लिन सकेन, किनकि यो पहिले नै लोड भएको छ। आदर्श विकल्प - एक अलग हार्ड ड्राइव।
यदि सम्भव भएमा, वर्चुअल मेमोरी प्रयोग गर्नबाट थप RAM स्लॉटहरू स्थापना गर्नुहोस्। नतिजाको रूपमा, ओएसको परिचालन गति वृद्धि हुनेछ। "सात" को लागि पर्याप्त6GB को भौतिक मेमोरी हो, जुन तपाईको वित्तीय अवस्था झिक्न सक्दैन।
आफ्नो स्वैप फाइल आकार सेट गर्नुहोस्, किनकि प्रणालीले लगातार बढाउँछ। यो हार्ड ड्राइवको टुक्राको कारण हो। यो एक मान सेट भर्चुअल मेमोरीको अधिकतम र सुरुवात रकम सेट गर्न सिफारिस गरिएको छ।
वैसे, एफपी को न्यूनतम आकार HDD को विघटन को रोकन को लागि 1 GB भन्दा कम हुनु हुँदैन।
त्यसोभए, तपाईलाई बुझ्न किन तपाइँलाई विन्डोज7प्याजिंग फाइल चाहिन्छ, जहाँ यो छ र त्यसलाई कसरी कन्फिगर गर्न सकिन्छ। निस्सन्देह, यो राम्रो हुनेछ कि सबै भन्दा स्वैप फाइल प्रयोग नगर्नुहोस्, खासगरी जब अहिले भौतिक मेमोरी यति महंगी छैन। यद्यपि, यदि तपाइँसँग पुरानो कम्प्युटर छ जुन RAM स्लॉटको लागि अतिरिक्त स्लॉटहरू छैन भने, त्यसपछि स्वाप फाइल धेरै अवस्थामा पर्दछ, किनभने आधुनिक खेलहरू र कार्यक्रमहरू "RAM" को धेरै प्रयोग गर्छन्।
अनुकूलनको सम्बन्धमा, तपाईं अनुभवी व्यक्तिहरूको सिफारिसहरू पछ्याउँदा सबै सेटिङहरू स्वतन्त्र रूपमा प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ। यो धेरै गाह्रो छैन, त्यसैले तपाईंसँग कुनै समस्या छैन। अनुभवी प्रयोगकर्ताहरूसँग कुराकानी गर्दै, प्रश्नहरू सोध्नुहोस्, र तपाईले तिनीहरूलाई जवाफ दिनुहुनेछ।
पहुँच कसरी सीमित गर्न ल्यापटपमा पासवर्ड राख्नुहोस्
त्रुटि कोड 800b0001 विन्डोज 7: यो के छ र यसलाई कसरी सम्झौता गर्ने
विन्डोज 10 मा प्रयोगकर्तानाम कसरी परिवर्तन गर्ने: सरल उदाहरणहरू र यससँग सम्बन्धित प्रश्नहरू
IPv6 प्रोटोकल: विन्डोज प्रणालीहरूमा सेटिङ
व्यवसायको बारेमा उद्धरण र ठूलो मानिसहरूको सफलता: समृद्धि लागि पाठ्यक्रम
एक हुक तकिया कसरी बाँध गर्न। शुरुआती लागि बुना तकिया crochet
ठूलो रहस्य धूम्रपान
निर्देशन बनाउनको लागि: बेचिन्छ जो सामान, को प्याकेजिङ्ग
सिलिकन (रासायनिक तत्व) गुण विशेषता सूत्र। सिलिकन खोल्ने कथा